Izilwanyana ezinceda abantu abagulayo
Abantu abanemfuyo bahlala ixesha elide kunabo abangenalo. Esi sisiphumo sophando, esiqinisekisiwe ngokuqinisekileyo. Kwaye, ngokomzekelo, kumakhaya asebekhulile, apho kukho izilwanyana kunye nezityalo, iindleko zonyango zancitshiswa ngama-60%. Ngaloo ndlela, kumazwe amaninzi avumele ngokusemthethweni unyango olubandakanya izilwanyana. Izilwanyana eziqhelekileyo ezinceda abantu abagulayo zizinja, amakati, amahashe kunye namahlengethwa.
Siyabulela ukuthatha inxaxheba kwabazalwana bethu abancinci, abantu abakhubazeke ngokwenyama okanye ngokwengqondo banethuba lokufumana ngokupheleleyo okanye, ubuncinane, ukunciphisa izinga lokukhubazeka. Ukongezelela, izilwanyana zinceda abantu abaneengxaki ezihlala kuluntu. Ngoko ukuba awunayo iilwanyana, uthenge ubuncinane intlanzi.
Ziziphi izilwanyana ezinika ubomi bomntu?
* Bazisa uvuyo nolonwabo kwimpilo yemihla ngemihla.
* Banika umntu umsebenzi, unyanzelekile kwaye unakekele.
* Akuvumela ukuba ucinge ngomnye umntu, ngaphandle kwakho, iingxaki zakho nezifo.
* Ukuphucula intsapho kwintsapho.
* Bandisa izinga lokuziphatha kunye nokuziphatha.
* Zivuselela ukuhamba kunye nomsebenzi.
* Banikeza umthombo wokufudumala nothando.
* Bakhulisa ukuzithemba, banike intsingiselo ebomini.
* Banika ithuba lokufumana abahlobo abatsha.
* Banceda ngokukhawuleza badlule bodwa, ukugula kunye nokudandatheka.
Banciphisa izinga loxinzelelo.
* Banciphisa uxinzelelo lwegazi kunye namazinga e-triglyceride egazini
* Ziyakuvumela ukuba wenze uhlobo olukhethekileyo nolunqamlekileyo lolwalamano: umntu uyisilwanyana.
Canistherapy - unyango kunye neenja
Le ndlela yokwelapha kunye nokuvuselelwa kunceda abantu abakhubazekileyo kunye nabo baneengxaki zokulungelelaniswa koluntu. Kuqhutywa ngokuthatha inxaxheba kwizinja eziqeqeshiwe ngokukhethekileyo.
Unika ntoni? Ukunxibelelana nenja kunceda ukugxila, kuthintela ukuphuhliswa kwentetho nokukwazi ukufunda. Ikhuthaza zonke iingqondo: ukubona, ukuva, ukuthinta kunye nokuvumba. Abantu abathatha inxaxheba kulwaphulo baqatshelwa ukuphucula inkcazo yobudlelwane obangela imbangela, ukuqatshelwa kombala kunye nokuma, ukufana kunye nokungafani. Ngexesha lokuzonwabisa kunye nenja, abantwana banokukhululeka ngakumbi, bahlakulela ifomzimba yabo kwaye bafunde ukubonisa iimvakalelo zabo.
I-Felinotherapy - unyango ngokuthatha inxaxheba kweekati
Unyango olunjalo lunceda abantu abaneengxaki ekusebenzeni kuluntu. Injongo yalo kukukunqoba ukwesaba ekudibanisaneni nendalo. Ukunxibelelana nekati kuya kukhuthaza ukuphuhliswa kwezitho zomzimba (ukubona, ukuva, ukuthinteka, ukuvumba), kunye nokunceda ekuvuseleleni.
Unika ntoni? Okokuqala, uboya bezilwanyana ezihlambululayo, bukhulula uxinzelelo, buyekelela. Okwesibini, ukucocwa kwekati kuneempembelelo zokuthoba kwi-psyche yezigulane eziye zanyangwa, kodwa kungekhona kuphela. Izifundo zibonisa ukuba ukuhlambulula (ukuphindaphindiweyo kwe-1925-1925 Hz) kukukhuthaza ukuhlaziywa kwamathambo, iintambo, iigaments kunye nezihlunu kunye nokunciphisa intlungu.
Impembelelo yeekati nezinja kubantu
Amakati kunye neenja ezidlala indima ebalulekileyo ekuhlanganisweni kwendawo yentlalo kunye nentsapho. Bafundisa uxanduva, uvakalelo nokuzithemba. Oku kubaluleke kakhulu kwiintsapho apho kukho abantwana abaneengxaki zokulawula iimvakalelo. Iikati neenja zenza uxhulumaniso kwihlabathi, zikuvumela ukuba uthethane kakuhle nabanye. Ubuhlobo kunye nekati okanye inja yenza izinto ezintle kubantu asebekhulile nabantwana. Emva kweminyaka emininzi yophando kunye nokusetyenziswa okusebenzayo eUnited States, uluhlu lwezifo kunye neemeko zentlalo luye lwahlanganiswa, kwindlela unyango olunxibelelana ngayo nekati okanye inja liphumelela:
Ukudandatheka (uxinzelelo, ukuxhalaba, ukudabuka)
I-muscular dystrophy (i-muscular dystrophy)
Ukuphulwa komonakalo nombono
Izifo zesistim ejikelezayo
Ubuhlungu be-etiology engaziwayo
Izibhedlele ezininzi zeengqondo ziye zabona ukuxuba okulungileyo kweenja kunye neekati kwizigulane. Izilwanyana zinika izigulane zithemba, zikhokelela ekufunyaneni kwihlabathi langaphandle. Ukusebenzisana nezilwanyana, abantu banqwenela ukudibana nabo. Kukho amabali awaziwayo ngabantu abathi, ngenxa yeekati okanye izinja, baqala ukuthetha, bahambe okanye bafumane emva kokugula okukhulu. Kuze kube ngoku, amathuba ethu engqondweni awazange afundwe, kodwa siyazi ukuba ingaba luninzi olunokufezekiswa ngoncedo lokunika amandla. Amakati neenja zisinceda sikholwe.
Ukunyuka kwi dolphinarium kunconywa ngokuyinhloko kubantwana abane-autism, i-cerebral palsy, i-Down's syndrome kunye nezinye iingxaki zegazi okanye zeengqondo. Kuye kwabonakaliswa ukuba phakathi kwezilwanyana ezinceda abantu abagulayo, ihlengethwa zihlala kwindawo yesithathu emva kwezinja kunye neekati. Xa usebenza namahlengethwa, ukukhululwa kwe-endorphins kwanda. Ezi ihomoni zinoxanduva lokuzonwabisa kwaye ziphelise iintlungu ezonakalisayo. Ngaloo ndlela, phambi kwamahlengethwa, izigulane, kwanabo abaye babandezeleka kakhulu, bayavuya ukuthetha kunye nokulibala ngezifo. Oku kunika iziphumo ezinkulu.
I-Hippotherapy - unyango ngamahashe
Ulwabiwo lweehashe lusetyenziswe ukunceda abantu abagulayo, ingakumbi abantwana abanezakhono ze-psychomotor (umzekelo, uninzi okanye umthambo omncinci kakhulu), isohlo kunye nomonakalo wokuvalelwa. Le ndlela inconywa kubantu abanokukhubazeka kwengqondo kunye nokuphazamiseka kwengqondo. I-Hippotherapy yenziwa ngabayingcali kwi-odokotela.
Unika ntoni? Ngethuba le-hippotherapy, ukuxhatshazwa kwemisipha kuyancipha kwaye i-posture efanelekileyo yenziwa. Ukubandakanya ukuzuza ngokufanelekileyo kukuthintela ubushushu (umzimba wehashe uyashisa ngaphezu komntu) kunye nokugubha kwesigqi xa uhamba. Uluhlu lweentshukumo zehashe lubaphazamisa ngokumangalisayo amalunga omgudu, amahlombe kunye nemilenze yomntu onalo. I-Hippotherapy iphilisa ngokulandelelana kwazo zonke izihlunu kunye namalungu omntu.
Inzuzo ekunxibelelaneni nezilwanyana
Ezi zizilwanyana ezisisiseko kuphela ezikunceda - abantu abagulayo banokunyangwa nangona kudibaniswa neentlanzi eziqhelekileyo. Umgca ongundoqo kukuba ukusebenzisana kwabantu kunye nezilwanyana kunokubonelela ngezibonelelo ezilandelayo kubantu abadala nabantwana:
Uvelwano. Izifundo zibonisa ukuba abantwana abahlala ezindlini apho isilwanyana kuthathwa njengelungu lentsapho lukhula ngakumbi kunabantwana kwiintsapho apho kungekho zilwanyana. Abantwana babone izilwanyana njengelilinganayo. Kulula kubo ukuba babonise iimvakalelo kwizilwanyana kunabantu abajikelezile. Izilwanyana zivulekile kwaye zinyanisekileyo - abantu abangekho ngqo kwaye baqondakala. Umntwana ufunda ukufunda ulwimi lomzimba wezilwanyana, ukuphuhlisa iimpawu zengqondo nokuziphatha. Xa abantwana bekhula, ukukwazi ukuqonda izilwanyana kuya kumava okuthetha nabantu.
Ukugxila kwilizwe langaphandle. Abantu abanesifo sengqondo okanye ukuzithoba kwabo bafuna kakhulu ukunxibelelana nesilwanyana. Izilwanyana zingabancedisa ukugxila kwimeko. Esikhundleni sokucinga nokuthetha ngabo kunye neengxaki zabo, bajonga baze bathethe ngezilwanyana.
LeMfundo. Abantwana abaninzi abanethuba lokunyamekela izilwanyana baphezulu kakhulu kunontanga yabo ngokwemfundo kunye nobunzima. Ukunyamekela isilwanyana kufuna ulwazi oluthile, ukuzaliswa rhoqo kolwazi, izakhono zemihla ngemihla kunye nezakhono. Oku kusoloko kunemiphumo emihle kubo bobabini kunye nabantu abadala.
Ingqiqo yokhuseleko. Izilwanyana zinceda abantu abagulayo benza ishaneli esilungelelanayo yokunxibelelana nehlabathi langaphandle. Ukususela kwindawo yokujonga unyango lwezilwanyana, oku kunceda ukudala umoya okhuseleko lwangokomzwelo. Ubukho bezilwanyana buya kutshabalalisa umendo ngokusebenzisa ukuphikiswa kokuqala kwesigulane. Abantwana bayakwazi ukukhulula iimvakalelo zabo baze bavulele amava amava.
KuLuntu. Izifundo zibonisa ukuba xa inja neekati ziza kutyelela isikhungo sezempilo, ukuhleka kunye nokusebenzisana kubonakala phakathi kwezigulane. Ubukho bezilwanyana buphucula ukuhlaliswa koluntu ngeendlela ezi-3:
- Phakathi kwamabanjwa
- Phakathi kwezigulane kunye nabasebenzi basezibhedlele
- Phakathi kwamalungu entsapho
Abantu baphikisana ukuba kulula ukuba baxoxe nabanye ngelixa bevakashela izilwanyana. Iintsapho zisoloko ziza kunyango kunye nezilwanyana, zibiza ukuba eli lixesha elimnandi, lingenakulungiswa ngenye into.
Ukuvuselelwa kwengqondo. Injabulo yengqondo ngenxa yokunxibelelana okwandisiweyo nabanye abantu, ukuhamba kwememori kunye nokuzonwabisa - konke oku kunikwa izilwanyana. Ukuqhagamshelana nezilwanyana kunokunceda ukunciphisa iimvakalelo zokuzihlukanisa kunye nokuhlukana kwezigulane.
Ukuqhagamshelana nomzimba. Kuninzi ebhaliweyo malunga nobudlelwane bokuthintana nomzimba kunye nempilo. Kubantwana, thintela unyango lunceda ukuphuhlisa ubuchule bokuseka ubudlelwane obuhle nabanye abantu. Ngokuqhelekanga ngaphandle kwalokhu, abantwana abakwazi ukuphuhlisa ngokwenyama kwaye bengakhuli. Kwizibhedlele apho ukuchukumisa kudla buhlungu ngenxa yesigulane, ukuthintela kwezilwanyana kukhuselekile, kungabungozi kwaye kuyanomdla. Kukho iiprogram ezininzi zabantu abaye bathatyathwa ngokuxhatshazwa ngokwenyama okanye ngokwesondo xa abasebenzi kunye namavolontiya bengenakuchukumisa izigulane. Kwiimeko ezinjalo, ukukwazi ukuchaphazela izilwanyana kunye nokunyanzelisa izi gulane kubaluleke kakhulu. Ngoko baya kuba nethuba lokufumana uxhapha lomzimba.
Iingenelo zengqondo. Ukunxibelelana nezilwanyana kunemiphumo emihle kwimisebenzi ephambili yomzimba. Abantu abaninzi abagulayo badinga ithuba lokuphumla phambi kwezilwanyana. Izifundo zibonisa ukwehla okukhulu kwixinzelelo legazi kunye nenani lentliziyo. Ngaphandle kokubukela iintlanzi zokubhukuda kwi-aquarium kunokukhululeka kwaye kunomvuzo.
Indlela yokugcina iguana ekhaya
Indlela yokunyamekela i-Chinesefishfish
Iintlobo ezidumileyo zezinja
Ndifanele nini ukugoma iinja?
Ukutsalwa kunye nokutyalwa kweekati. Yintoni oyifunayo ukuba ukwazi umnikazi?
Isondlo ekhaya leekati, izinja nezinye izilwanyana
Izizathu ezi-10 zokuba abantu baphossa abafazi
Ukupheka okukhawulezayo kakhulu
Indlela yokwenza iincwadana ezincinci ekhaya?
Iingcamango zamabhinqa xa zijongana namadoda
I-yogga yogalelo okanye i-yoga emoyeni
U-Julia Kostyushkina utshintshe ngaphaya kokuzalwa kwakhe unyana wokuqala, ngaphambi nangemva kweefoto
I-salsa esuka kwinaninku nepapaya
Amandla "uPina colada"
Ukupheka kweMenyu yeNtsha kuNyaka weeGolo (iigusha) 2015
Ama-anecdotes amasha: Uya kuhleka iinyembezi
Omusoba - i-omelette yaseJapan
I-Bruschetta kunye nemifuno emnyama kunye nokuhamba
Indlela yokukhetha iiglavu zasebusika zamabhinqa ezifanelekileyo
UCharlotte nge-apula iresiphi elula